Nivoaka ny didy momba ny tany eny Ambohimangakely : migadra 30 volana an-tranomaizina Ramaroson Alain | NewsMada
Nivoaka ny didy momba ny tany eny Ambohimangakely : migadra 30 volana an-tranomaizina Ramaroson Alain
Ho vita tanteraka ny aminy ? Nivoaka, omaly tetsy amin’ny fitsarana Anosy ny didim-pitsarana momba ny raharahan’ny tany eny Ambohimangakely. Voasazy higadra 30 volana an-tranomaizina ny mpitarika ny antoko Master’s. Mbola niampy onitra koa izany, ankoatra ny sazy teo aloha.
Niakatra fitsarana, ny 1 aogositra teo, ity resaka tany eny Ambohimangakely, ifanenjehan’ny fianakaviany sy Ramaroson Alain ity. Nivoaka, omaly, ny didim-pitsarana momba izany ka mampiditra am-ponja azy roa taona sy tapany. Tsy vitan’izany fa mbola mandoa onitra amin’ireo mpitory, hatrany amin’ny 200 tapitrisa Ar ny tenany.
Etsy andaniny, voasazy higadra herintaona an-tranomaizina koa Ramaroson Alain momba ny raharahan’ny tany eny Andoharanofotsy, ao amin’ilay kianja Ramaroson, tamin’ny didim-pitsarana iray hafa, herinandro vitsy lasa izay. Mbola ny fianakaviany ihany no nitory azy tamin’izany. Efa notanana am-ponja vonjimaika (MD) herintaona anefa izao ity filohan’ny vaomieran’ny fandriampahalemana teo anivon’ny CST ity ka efa nahavita ny saziny amin’io raharaha iray io. Na izany aza, mbola mandoa onitra hafa, 950 tapitritsa Ar amin’ireo nitory azy koa izy amin’io.
Manampy izany, nahazo sazy mihatra 60 volana an-tranomaizina sy mandoa onitra hatrany amin’ny 60 tapitrisa Ar ihany koa ilay sekretera jeneralin’ny kaominin’i Behenjy. Anisan’ny voarohirohy tamin’ny fanaovana hosoka niaraka tamin-dRamaroson Alain izy.
Tsy afa-bela amin’ny maha mpanao politika azy ?
Midika izany fa tsy afa-bela tanteraka ity mpanao politika mahitsy fiteny ity amin’ireo raharaha roa ireo. Tena nalentika tanteraka amin’io resa-pianakaviana io… Fa mety misy ambadika politika koa any ho any ? Misy ifandraisany amin’ny maha mpanao politika mpanohitra azy ny raharaha ka nalentika tanteraka amin’ity raharaham-pianakaviana ity ? Hampanginana an-dRamaroson Alain tsy hitsikera na hanakiana intsony ny fitondrana izany sazy roa taona sy tapany izany ?
Ankoatra izany, tsy hita popoka ireo namany sy mpiara-mitolona aminy… Andrasana ny ho tohiny !